About Us - Dongguan Glorystar Laser Co., Ltd
Dongguan Voninahitra Star Laser Teknolojia Co., LTD, Sino-Alemana fiaraha-miasa, mifantoka amin'ny tamin'ny laser teknolojia sy fampiharana, taorian'ny fanavaozana mitohy nandritra ny taona maro sy ny fampandrosoana, dia lasa fanta-daza goavana tamin'ny laser mpanamboatra ny fitaovana.
Ny orinasa manana birao, R & D Building, machining tsena, sary hoso-doko sy ny welding tsena, mivory fivarotana, maoderina ary ny fitsipika indostria showroom orinasa.
Ny orinasa tena vokatra ireo fanapahana vy tamin'ny laser milina, tsy tamin'ny laser fanapahana vy milina, tamin'ny laser manamarika milina, tamin'ny laser ary hiondrika welding milina famokarana isan-taona machines.The fahafahan'ny 8000 karazana vokatra amidy ao amin'ny firenena mihoatra ny 100 sy ny faritra.
Ny orinasa dia fantatra ho toy ny firenena teknolojia avo-toeram-piasana, ary imbetsaka nahazo ny teknolojia Innovation Award. Amin'ny maha-mpitarika ao amin'ny tamin'ny laser fitaovana, Glorystar Laser ny teknolojia Co., Ltd manana feno R & D rafitra, maro ao an-toerana malaza anjerimanontolo sy ny fikarohana andrim-panjakana mba hihazonana ny akaiky Optical sy ara-teknika fiaraha-miasa, koa Nanyang misahana ny siansa sy ny teknolojia Graduate Trainee fipetrahany izy.
Products natao tamin'ny taona EU taratasy fanamarinana sy ny SGS taratasy fanamarinana, ary amin'ny lafiny rehetra ny Narahi, dingana, milina, ary ny fandefasana entana hafa hifanaraka amin'ny ISO kalitao sy ny rafitra fitantanana ny tontolo iainana fitantanana ny toro lalana mba ho azo antoka fa ny toetra-pirenena. Mitondra ny Global fijery eto anatrehako, dia tsy mitsahatra mifantoka GLORYSTAR ny tamin'ny laser siansa sy ny teknolojia mba hizara aminareo amin'ny ho avy soa aman-tsara!